बन्दा खेती प्रविधि - Bharosa Media
Posted by: Yangzoom Tamang in Agriculture January 5, 2019	1,627 Views
परम्परागत रुपमा हिंउदमा चीसो हावापानीमा खेती हुने वाली बन्दा केही गर्मी सहन सक्ने जातहरुको विकास गरिएपछि हाम्रो देशको मध्यपहाडी क्षेत्रमा गर्मी याममा पनि खेती गर्न थालिएको छ । त्यस्तै लेकाली क्षेत्र जहाँ वर्षयाममा पनि खासै गर्मी हुदैंन त्यस क्षेत्रमा पनि वर्षायाममा बन्दा खेतीको विस्तार भएको छ । त्यसैले मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा गर्मी समयमा अर्थात असार देखि कात्तिकसम्म उत्पादन गरिने वालीलाई वैमौसमी वन्दा खेती भनिन्छ भने कातिक पछि जेठसम्म उत्पादन हुने वन्दा मौसमि बन्दा हो ।
वीउदर– १ रोपनी जग्गाको लागि प्राईड अफ ईन्डिया र गोल्डन एकर जातको लागि २० देखि ३० ग्राम र हाइब्रीड जातको लागि १० ग्राम वीउको आवश्यकता पर्छ ।
मध्ये पहाडमा बेमौसमी बन्दा उत्पादन गर्न चैत देखि असार सम्म बेर्ना राख्नुपर्छ । र २०–२५ दिनको विरुवा सार्नु पर्दछ । मौसमि बन्दाको लागि भने साउन पछि बैसाखसम्म बेर्ना राखिन्छ ।
पारिलो वा विहान देखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने, पानी नजम्ने, सिँचाइ र निकासको राम्रो व्यवस्था भएका ठाउ छान्ने । अलि अलि वालुवा मिसिएको, खुकुलो दोमट माटो भएको, प्रशस्त प्राङ्गारिक पदार्थ भएको रुख, कान्ला, घर, गोठ आदि केहीको पनि छाँया नपर्ने ठाउँ नर्सरीकोलागि उपयूक्त हुन्छ ।
ठिक्क चाहिने चिस्यानको व्यवस्था गर्न वर्षायाममा बनाईने ब्याड कम्तिमा १५÷२० से.मी उच्चो हुनु पर्छ । ब्याडको वरीपरी कुलेसो काटेर पानी तर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ब्याडको चौडाइ १ मिटर जति र लम्बाई आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ । राम्रोसँग खनजोत गरी झारपात, ढुंगाका हटाई डल्ला फोरेर माटोलाई बुर्बुराउँदो बनाउनुपर्छ ।
१ वर्गमिटर ब्याडलाई ५ किलो गोठेमल, ५ ग्राम युरिया, ५ ग्राम डि.ए.पि., ५ ग्राम पोटासका दरले हाली माटोमा राम्ररी मिलाउनुपर्छ । नोटः– मलिलो माटोमा गोठेमल ८–१० किलो र खरानी ४,५ मुठ्ठी प्रति वर्गमीटर राख्न सके रासायनिक मलको आवश्यक्ता पर्दैन ।
८÷१० से.मी. (५—६ अँगुल) को फरकमा २ से.मी. (१ अँगुल) गहिरो धर्सा बनाउनु पर्छ । हरेक धर्सामा ४ से.मी. (२–३ अँगुल) को फरकमा बीउ खसाल्नुपर्छ । त्यस धर्सामा बालुवा, खरानी, माटो वा कम्पोष्टको धुलोले बीउ पुरेर हातले हल्कासंग थिच्नुपर्छ । बीउ रोपिसकेपछि वर्षायामको मुसलधारे पानीबाट जोगाउन निम्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
छानो वा गुमोजको व्यवस्थाः–
नर्सरीलाई बर्षात वा बढि चिस्यानबाट बचाउन घाम छिर्ने तर पानी नछिर्ने सेतो प्लाष्टिकको छानो (१–१.५मीटर अग्लो र एकतिर करालो परेको) बनाउनुपर्छ । पानी परेको बेला प्लाष्टिकले छोप्ने र पानी नपरेको बेला प्लाष्टिक हटाउनु पर्छ । तर राती नर्सरीलाई प्लाष्टिकले ढाक्नुपर्छ । तर हिउदमा बेर्ना उत्पादन गर्न को लागि भने पालोबाट बचाउनको लागि प्लाष्टिकको गुमोज बनाउनुपर्छ । बेर्ना उम्रेपछि दिउसो प्लाष्टिक हटाउने र राती छप्ने गर्नुपर्छ ।
यसका लागि २,३ दिन बिराएर हजारीले एकनाससँग बिहान वा साँझपख १ भाग मुत्र वा गितीमलमा ८,१० भाग पानी मिसाएर छर्कनुपर्छ । झारपात देखिने बित्तिकै उखेली हटाउनुपर्छ र चुच्चे कुटोले ब्याड हल्कासँग खोस्री एक दुई पटक बेर्ना गोड्नुपर्छ ।
बेर्ना सार्ने दुरी
अगौटे जातहरुको लागि ४० सेमि बोटदेखि बोट र ४० सेमि लाईनदेखि लाईनको दुरी र ६० सेमि लाईनदेखि लाईनको दुरी र ४५ से.मी. बोटदेखि बोटको दुरी उपयुक्त हुन्छ ।
बन्दा लगाउने जमिन २,३ पटक खनजोत गरि डल्ला फुटाउने, ढुङ्गा, झारपातहरु र बाली नालिका अवशेषहरु हटाउने । बर्षातमा खेती गरिने भएकाले १० सेमि जति अग्लो ड्याङमा बेर्ना रोप्नुपर्छ । अथवा निकासको लागि हरेक २÷३ लाइनको फरकमा १०÷१५ (१ कुरेत) गहिरो र १ मुडी हात चौडा कुलेसो बनाउने । वरिपरिबाट निकासको राम्रो ब्यवस्था गर्ने ।
बिरुवा रोप्न को लागि २० सेमि(१ बित्ता भन्दा गहिरो खाडलहरु बनाई प्रत्येक खाडलमा २, ३ किलो राम्ररी पाकेको पर्सो, १५ ग्राम गेडामल, १० ग्राम पोटास वा १ मुठी खरानी राख्ने । बोरेक्स १ किलो प्रतिरोपनी का दरले जमिन तयार गर्दा माटोमा मिसाउने ।
बेर्ना सार्नु १ हप्ता पहिले देखि सिचाई नगरिकन बेर्नालाई खुला वतावरणमा बानी पार्नु पर्दछ । यसको लागि वर्ना ३ पातको भएपछि २,३ दिन सम्म दिनमा प्लाष्टिक हटाउने तर रातको समयमा छोप्नुपर्दछ । त्यसपछि सधैंको लागि प्लाष्टिक हटाइदिनु पर्दछ । ब्याडमा बेर्ना तयार भएपछि बेर्ना उखेल्नु १,२ घन्टा अघि पानीले भिजाउनु पर्छ र जरा नटुट्ने गरी खुर्पीले माटो समेत निकाल्नु पर्छ । र मल राखिएको खाडलमा ब्याडमा बेर्नाको जति भाग माटोमा छ त्यति नै भाग मात्र माटोमुनि पर्नेगरि रोप्ने र सिंचाई गर्ने । बेर्ना सारेको १,२ दिनमै नुभान १ एम एल र बेभिष्टिन १ ग्रा प्रतिलीटर पानीमा मिसाई बेर्नामा र वरीपरी फेदमा समेत पर्नेगरी छर्ने ।
बिरुवा सारेको २०, २५ दिनपछि ५,५ ग्राम (१÷१ चिम्टी) यूरिया, र पोटास वा १ मुठि खरानि प्रतिबोट पर्नेगरि फेदबाट ५सेमि टाढा ५ सेमि गहिरो गरी राखि छोपिदिने र डल्ला बन्न लागेपछि प्रतिबोट ५ ग्रा यूरीया बोट वरिपरि छरेर माटोमा मिलाउने र सिचाई गर्ने । युरीयाको वदलामा गहूत वा गितीमल १ भागमा ५ भाग पानी मिसाएर १० दिनको फरकमा छर्कन सकिन्छ ।
बन्दामा लाग्ने रोग र कीरा व्यवस्थापन–
रोग कीरा लाग्न नदिने वा आर्थिक रुपमा क्षति हुन नदिने उपायहरु
१) रोग अवरोधक जातहरु जस्तै बन्दाको ग्रीन क्राउन, गी्रन कोरोनेट, टी–६२१ जातको खेती गर्ने ।
२) सिरेसान वा क्याप्टान २ ग्रा. प्रति किलो का दरले वीउ उपचार गर्ने ।
३) नर्सरीको राम्रो व्यवस्थापन गरी स्वस्थ विरुवा मात्र सार्ने ।
४) राम्ररी पाकेको गोवरमल को प्रसस्त प्रयोग गर्ने ।
५) झारपात तथा पुरानो पातहरु हटाएर खेतबारी सफा राख्ने र लामो फसल चक्र अपनाएर खेती गर्ने ।
६) राम्ररी अवलोकन गरी पातको तल्लोपट्टी भएका पूतलीका पहेला अण्डाहरु र लार्भा हरु थिचेर मार्ने ।
७) निकासको राम्रो ब्यवस्था गर्ने र बेर्ना ड्याङमा लगाउने ।
१) ड“ाठ, फेद, वा जरा कुहिने रोग– यो रोग लागेर विरुवा ओईलाएमा डाईथेन एम ४५ एक लिटर पानीमा २ ग्राम का दरले १० दिनको फरकमा २ पटक छर्कने । गोवर पानी को झोल ४,५ पटक प्रयोग गरेमा पनि यो रोगको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
२) कालो सडन– बन्दाको पातको नसाहरुको बीचमा तीनकुने आकारको पहेलो खैरो धब्बा देखिन्छ र पछि डाठ पात कालो भई कुहिने र गन्हाउने हुन्छ । यसको व्यवस्थापन को लागि पी. सुरक्षा प्रतिलिटर पानीमा घोलेर ४,५ दिनको फरकमा छर्कने । साथै प्लानटोमाइसीन वा स्ट्रेप्टोमाइसीन १,२ मि. लि. प्रति १० लि. पानीको दरले २/३ पटक छर्कने । लामो वाली चक्र अपनाएर खेति गर्ने ।
३) पात नरम भएर सडने रोग– शुरुमा यो रोग लागेको बोटको केही पातहरु दिउसो ओईलाउने र साझ स्वस्थ देखिन्छन् पछि पात कुहिएर मर्छ । डल्ला को बाहिरी पात भन्दा भित्री पात बढी कुहिएको देखिन्छ । यसको व्यवस्थापनको लागि स्वस्थ वेर्ना प्रयोग गर्ने, लामो वाली चक्र अपनाएर खेति गर्ने, राम्रो निकासको व्यवस्था मिलउने,माटोमा प्रसस्त गोठेमल मिसाउने । डाइथेन एम– ४५ वा बेभिस्टिन २ ग्राम प्रति लिटर पानीको दरले १५,१५ दिनको फरकमा २,३ पटक छर्कने ।
१) लाही किरा– यी किराहरुले कलिलो मुन्टा वा पात मुन्तिर वसेर रस चुसेर क्षति पु¥याउछन् । जसले गर्दा वोट नबढने र पात खुम्चने गर्छ । यसको रोकथामको लागि १ भाग गौंत मा १० भाग पानी मिसाएर छर्कने । खरानी छर्कने ।
२) पात खाने लार्भाहरु– यी लार्भाहरुले पातको हरीयो भाग खाई पात जालीजस्तो वनाईदिन्छ र यसको प्रकोप बैशाख जेष्ठमा बढि हुन्छ । यसको रोकथामको लागि मार्गोसोम वा मल्टिनिम ३ मिली लीटर प्रति लिटर पानीका दरले छर्कने । वा मालाथियन वा थायोडान २ एम.एल.प्रतीलीटर पानीका दरले किराहरु देखेपछि छर्कने । वा १० दिनको अन्तरमा बानस्पतिक बिषादिको प्रयोग गर्ने । लार्भालाई खाने बारुलाको संरक्षण का लागि घातक बिषादिको प्रयोग नगर्ने ।
मौसमी बन्दा प्रतिरोपनी १०००–१५०० किलो सम्म उत्पादन हुन्छ । त्यतिबेला बन्दाको मुल्य रु ५–१० सम्म पर्छ ।
– कालीप्रसाद पाण्डे
Previous: सार्वजनिक बिदा थप गर्न सिफारिस
Next: सिकाई सुधारका लागि
भूमिका हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा गोलभेडा, भन्टा, भेडे खुर्सानी, पीरो खुर्सानी र रामतोरिया धेरै महत्वपूर्ण तरकारी ...